ဆိုင်ကယ် ရောင်းရန် Carmudi Myanmar [Burma]
Honda Motorcycles (57)
Scoopy i (15)
Z 1000 (2)
New Anbo (2)
Sumbo Star (2)
RS Racing (2)
Super Anbo (6)
Grand Filarno (1)
Canda Demon Harley-Davidson Honda Motorcycles Kawasaki KTM Lanjia Nambo New Anbo New Bird New Star Newaibo Sky Go Skygo SRMC Stallions Sumbo Star Super Anbo Suzuki Toyomax TVS Yamaha Yunde Zangshen Zhansheng
အထူးသီးသန့်(4)
ခရမ်းရောင် / ပန်းရောင် (3)
Lks4+ Slip
2016 KAWASAKI H2R 2016 Kawasaki H2R, M4 Exhaust, Must See, Excellent Condition, Always garage,Never been dump and everything works as it should.For more info contact via whatsapp at..+97155 45...
Lks3ညှိနှိုင်း
2015SUZUKI GSX R750new muffler both improves mass centralization and sounds even cooler. You get improved gear-shift feel, along withanew adjustable brake lever, andahinged fuel cap for adde...
Lks 70 ငွေရှင်းမှုဖြင့်သာ
Faster than MPT ! JK ;) any sport cars in Myanmar !! Drive yourself and feel asaking on the road
Lks 8,000,000 ညှိနှိုင်း
2016 SUZUKI GSX-R750 contact Whatsapp at..+971543102270 Condition: Used Year: 2016 Make: Suzuki Model: GSX-R750 Category: Sportbike Type: Motorcycle Mileage: 2,186 2016 SUZUKI GSX-R750 in lik...
VIPAR HOLDING Co.,Ltd.
Grey ရောင် KTM Adventure အမျိုးအစား 2015 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Manual ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 1195 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်းပညာမ...
KTM Freeride 2015
White ရောင် KTM Freeride အမျိုးအစား 2015 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Manual ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 350 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်းပညာမျ...
KTM 200RC 2015
Lks 49 ညှိနှိုင်း
Black ရောင် KTM 200RC အမျိုးအစား 2015 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Manual ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 200 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်းပညာများက...
KTM RC8R 2015
Lks 260 ညှိနှိုင်း
White ရောင် KTM RC8R အမျိုးအစား 2015 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Manual ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 1195 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်းပညာများက...
White ရောင် KTM Duke 690 အမျိုးအစား 2015 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Manual ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 690 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်းပညာမျာ...
Lks 65 ညှိနှိုင်း
White ရောင် KTM Duke 390 အမျိုးအစား 2015 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Manual ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 390 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်းပညာမျာ...
KTM 390RC 390 2015
Lks 69 ညှိနှိုင်း
Black ရောင် KTM 390RC 390 အမျိုးအစား 2015 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Manual ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 390 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်းပညာမျ...
Orange ရောင် KTM Adventure အမျိုးအစား 2015 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Manual ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 1195 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်းပည...
KTM Duke 2015
Lks 40 ညှိနှိုင်း
White ရောင် KTM Duke အမျိုးအစား 2015 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Manual ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 200 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်းပညာများကု...
Honda Scoopy i Castrol 2014
Venus Auto Cycle
Blue ရောင် Honda Scoopy i Castrol အမျိုးအစား 2014 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 110 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ...
Honda Click PGM-Fi 125i 2015
Dark blue ရောင် Honda Click PGM-Fi 125i အမျိုးအစား 2015 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 125 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်...
Honda Scoopy i 2013
Red ရောင် Honda Scoopy i အမျိုးအစား 2013 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 110 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်းပည...
Red ရောင် Honda Click PGM-Fi 125i အမျိုးအစား 2015 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 125 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ...
Honda Scoopy i 2014
Blue ရောင် Honda Scoopy i အမျိုးအစား 2014 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 110 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်းပ...
Honda Scoopy i Flag 2014
Grey ရောင် Honda Scoopy i Flag အမျိုးအစား 2014 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 110 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . န...
Honda Scoopy i Prestige 2013
White ရောင် Honda Scoopy i Prestige အမျိုးအစား 2013 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 110 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ...
Honda Scoopy i 2012
Blue ရောင် Honda Scoopy i အမျိုးအစား 2012 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 110 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်းပ...
Honda Click PGM-Fi 2015
Grey ရောင် Honda Click PGM-Fi အမျိုးအစား 2015 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 150 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည...
Pink ရောင် Honda Scoopy i အမျိုးအစား 2013 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 110 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်းပ...
Honda Scoopy i S 2015
White ရောင် Honda Scoopy i S အမျိုးအစား 2015 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 110 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်...
Honda Click PGM-Fi 125i 2014
White ရောင် Honda Click PGM-Fi 125i အမျိုးအစား 2014 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 125 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ...
Black ရောင် Honda Click PGM-Fi 125i အမျိုးအစား 2015 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 125 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ...
Blue ရောင် Honda Click PGM-Fi 125i အမျိုးအစား 2015 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 125 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်...
Honda Scoopy i Jean Lover 2014
White ရောင် Honda Scoopy i Jean Lover အမျိုးအစား 2014 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 110 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါ...
မြန်မာပြည်မှ ‌မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ။ ။
မြန်မာပြည်မှာ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကို ရန်ကုန်ကလွဲလို့ အခြား မြို့ တွေမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ကို အသုံးပြု ပါတယ်။ အကြောင်းက ရန်ကုန်မှာ ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်က မြို့ နယ် အားလုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မြို့ တွင်း အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ မြို့ နယ် ၂၀ ဝန်းကျင်လောက်မှာသာ ပိတ်ထားပြီး ကျန်တဲ့ မြို့ ပေါင်း ၁၀ မြို့ ကျော်မှာတော့ ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်ခွင့်ကို အကန့်အသတ်နဲ့ ပေးထား ပါတယ်။ မြို့ တွင်း မှာတော့ အစိုးရဝန်ထမ်း အချို့ကိုသာ မောင်းနှင်ခွင့်ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ မြန်မာပြည်က မော်တော်ဆိုင်ကယ် အကြောင်းကို ပြောပါဆိုရင် မန္တလေး၊ တောင်ကြီး နဲ့ တရုတ်၊ထိုင်း နယ်စပ် မြို့ များက မဖြစ်မနေ ပါဝင်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မန္တလေးမှာဆိုရင် မော်တော်ဆိုင်ကယ် ဈေးကွက် အတော်လေးကြီးပါတယ်။ အားလုံးနီးပါးက နယ်စပ်ကနေ ဝင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နယ်စပ်ကနေ ဝင်တဲ့ တရုတ်ဘီးနဲ့ ထိုင်းနယ်စပ်ကနေ ဝင်တဲ့ ထိုင်းဘီးဆိုပြီး ကွဲနေပါတယ်။ တရုတ်ဘီးများကတော့ ဈေးအသက်သာဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်မပါရင် တရုတ်ဘီး တစ်စီး တန်ဖိုးက ၅ သိန်းဝန်းကျင်ပဲ ရှိပါတယ်။ အဟောင်းဆိုရင် ၃ သိန်းနဲ့တောင် ရနိုင်ပါတယ်။ ထိုင်းဘီးဆိုရင်တော့ ၁၀ သိန်းလည်းကျော်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဂျပန်ဘီးများလည်း ထိုင်းနယ်စပ်ကနေ ဝင်ပြီး သူတို့ကတော့ ဈေးအကြီးဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဟွန်ဒါ မော်တော်ဆိုင်ကယ်သို့မဟုတ် ကင်ဗိုဆိုင်ကယ်မှာအတော်လေး နာမည်ကြီးပါတယ်။ ဈေးလည်းကြီးပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်မှာမှ ပြိုင်ဆိုင်ကယ်၊ လုပ်ငန်းသုံး ဆိုင်ကယ်၊ ၂ ယောက်စီး ဆိုင်ကယ်၊ လမ်းသရဲ ဆိုင်ကယ် အစရှိသဖြင့် အမျိုးမျိုး ကွဲနေပါသေးတယ်။
ဆိုင်ကယ်တန်ဖိုးက သိပ်မများပေမယ့် ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ကို ဒေသအလိုက် ဝင်ရတာက ဆိုင်ကယ်တန်ဖိုး ဝန်းကျင်လောက်အထိ ဈေးများတတ်ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်မော်ဒယ်လ် မြင့်လေလေ၊ ကောင်းလေလေ လိုင်စင်ကြေး များလေလေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဆိုင်ကယ်ဝယ်တဲ့အခါ လိုင်စင်ပါပြီး ဆိုင်ကယ်နဲ့ လိုင်စင်မပါသေးတဲ့ ဆိုင်ကယ် ဆိုပြီး ၂ မျိုးကွဲနိုင်ပါသေးတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်မှာဆိုရင် မော်တော်ဆိုင်ကယ် အသုံးပြုမှုအတော်လေး တွင်ကျယ်ပါတယ်။ တရုတ်နယ်စပ်၊ ထိုင်းနယ်စပ်တို့မှာ ဆိုင်ကယ်ဈေးအတော်လေး သက်သာပြီး လိုင်စင်မလိုပဲနဲ့တောင် အသုံးပြုကြပါတယ်။ အမှန်တော့ လိုင်စင်လုပ်ဖို့ အစိုးရက သတ်မှတ် ထားပေမယ့် လိုင်စင်မပါ အရပ်ခေါ် ဝစ်သောက် ဆိုင်ကယ်များကိုလည်းအသုံးပြုမောင်းနှင်နေတာကို မြင်တွေ့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်ဝယ်တဲ့အခါ အသစ်ဟုတ်မဟုတ်၊ အဟောင်း ဟုတ်မဟုတ် ကိုလည်း သေချာ စစ်ဆေးဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။ ကြားခံ ပွဲစားများက ဝယ်ပေးတာမျိုးလည်း ရှိသလို၊ ပိုင်ရှင်က တိုက်ရိုက် ရောင်းပေးတဲ့ ဈေးကွက်လည်း ရှိပါတယ်။ ကြားခံ ပွဲစားက တစ်ဆင့် အရောင်းအဝယ် ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ပွဲစားခ ပေးရတာမျိုးတွေ ရှိပါသေးတယ်။
ရန်ကုန်မဟုတ်တဲ့ အခြားနယ်တွေမှာ နေသူများအတွက် ဆိုင်ကယ်ဆိုတာ မရှိမဖြစ် ယာဉ်တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ကားက လူတိုင်းမဝယ်နိုင်ပေမယ့် ဆိုင်ကယ်ဆိုတာ လူလတ်တန်းစားတွေတောင် ဝယ်နိုင်တဲ့ အနေအထား ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးချမ်းသာသူများက ဇိမ်ခံယာဉ်တစ်မျိုး ဖြစ်အောင် ဝယ်စီးသူ နည်းတဲ့ ပြိုင်ဆိုင်ကယ် အမျိုးမျိုးကို ဝယ်စီး ကြ ပါတယ်။ အချို့ ဆိုရင် အမေရိကန်က လမ်းသရဲဆိုင်ကယ်များ၊ ဥရောပက ခေါင်းအသေ ပြိုင်ဆိုင်ကယ် ခပ်လှလှများကိုပါ မှာယူ စီးကြ ပါတယ်။ အဲ့လိုအခြေအနေမှာဆိုရင် ကုန်ကျစရိတ်က သိန်း ရာဂဏန်းအထိလည်း ရှိသွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Motors.com.mm ဝဘ်ဆိုဒ်မှာ လူကြိုက်များ‌သော ဆိုက်ကယ်ဘရမ်းများမှာ ‌အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Honda Kit CZ-i
Super Anbo MSX